Vibenomics Maqalka Xayeysiiska Ka Baxsan Guriga: La Shakhsiyeeyay, Muusig iyo Fariin ku Salaysan Goobta | Martech Zone
Vibenomics Maqalka Xayeysiiska Ka Baxsan Guriga: La Shakhsiyeeyay, Muusigga Ku-salaysan Goobta iyo Fariimaha
Sabti, Febraayo 24, 2018 Talaado, Maarso 8, 2022 Douglas Karr
Maamulaha Guud ee Baabuurka Wash Brent Oakley ayaa dhibaato haysata. Gaadhigiisa qaaliga ah ee uu dhaqay aad ayay u garaacday, laakiin inta macaamiishiisa ay ku sugayeen gaadhigooda, cidina kama hawlgelin badeecadaha iyo adeegyada cusub ee ay u baahnaayeen inay bixiyaan. Waxa uu abuuray madal uu kaga duubi karo macaamiishiisa fariimaha gaarka ah, goobta ku salaysan iyo muusiga.
Oo iyana way shaqaysay.
Markii uu bilaabay inuu ku dhiirrigeliyo beddelka weelka muraayadda iyadoo loo sii marinayo raadiye bakhaarka ku jira, wuxuu iibiyay masaxayaal badan bil gudaheed wixii uu iibiyey shantii sano ee la soo dhaafay. Brent wuu ogaa inuusan kaliya xal u helin macaamiishiisa, wuxuu lahaa madal ay warshaduhu u baahnaayeen. Marka, wuxuu ka tagey meheraddii dhaqista gawaarida oo uu bilaabay Vibenomics.
Vibenomics waa xayaysiis Audio Out-of-Home ™ iyo shirkad khibrad leh oo awood u siisa kanaalada maqalka ah ee tafaariiqda, taasoo siinaysa summada inay si toos ah ula hadlaan dukaameeyaha goobta iibka. Iyada oo ay la socoto tignoolajiyadeeda xoogga leh ee daruuriga ku salaysan, maktabad muusig asal shati leh, awoodaha isku dhafka xogta, kooxda adeegga buuxa ee khabiiro khibrad maqal ah, iyo shabakad karti cod xirfadeed oo la dalbanayo, shirkaddu waxay siisaa dakhliga kor u qaadista saxda ah ee ka badan 150 xayeysiiyeyaasha gudaha in ka badan 6,000 oo goobood oo ku kala baahsan 49 gobol, oo gaadhay in ka badan 210 milyan oo qof.
Dukaamada tafaariiqda badanaa waxay bixiyaan xalalka muusikada shatiga leh, laakiin Vibenmoics waxay dhab ahaantii bixisaa muusikada iyo xalalka fariimaha kuwaas oo ku soo laabtay maalgashiga.
Vibenomics waxay siisaa ganacsiyada inay helaan maktabad muusig oo si buuxda u shati leh iyo abka si fudud loo isticmaali karo oo u oggolaanaya inay soo gudbiyaan oo helaan ogeysiisyo si xirfadaysan loo duubay isla maalinta aad codsato. Ganacsiyadu xitaa kama werweraan xatooyada xajmiyeedka ama arrimaha farsamada - madalku waxa uu ku shaqeeyaa kiniiniyada ku shaqeeya Sprint. Kaliya ku xidh, oo waad kor u kacday oo aad socotaa!
Waxaa lagu keenaa fur-iyo-ciyaar dabacsan, hanti leh, IoT karti u siisay ciyaartoyda warbaahinta, Vibenomics waxay si firfircoon u baahisaa xayeysiisyo maqal ah oo la rabo, iyo liisyo-ciyaareed la habeeyey oo ku dhex jira goob kasta oo raad qaran oo degdeg ah u koraysa, iyada oo furaysa kanaal suuq-geyneed cusub oo awood leh. si loo gaaro macaamiisha inta lagu jiro raadadka ugu dambeeya ee muhiimka ah ee wadada wax iibsiga. Iyadoo loo marayo barnaamijka ugu horreeya ee noociisa ah, tafaariiqleyaashu waxay heli karaan qayb ka mid ah dakhliga dhammaan xayaysiisyada ay iibiyaan Vibenomics ee ku ciyaara goobaha ay ku nool yihiin, iyaga oo siinaya awood ay ku maalgeliyaan mawjadaha hawadooda gaarka ah oo ay u beddelaan kharashka dhaxalka ah xarun cusub oo faa'iido leh. .
Iyada oo Vibenomics, ganacsiyada ayaa wadi kara natiijooyinka ganacsiga:
Ku riix alaabada si dhakhso leh una kordhi dakhliga macaamil kasta.
Macaamiisha ku baro wax soo saarka cusub iyo dalabyada kolba markay diyaar noqdaan
U kaxee macaamiisha websaydhkaaga rasiidh iyo dallacsiinno.
Ma aha oo kaliya ganacsiyadu daabici karaan fariimo iyaga u gaar ah, laakiin sidoo kale waxay u furi karaan shabakadooda xayaysiiyayaasha dhinac saddexaad! Eeg kooda xal si aad wax badan uga barato waxay ku caawin karaan warshadahaaga.
Dhageyso Wareysiga aan la yeelanay Brent Codso Demo Vibenomics ah
Tags: uuhaooh advertisingfariintaMusicOOHooh advertisingxayeysiis guriga ka baxsanshabakadda raadiyahatafaariiqda maqalkavibenomics
Muxuu yahay Tripod-ka La-qaadan karo ee ugu Wanaagsan Telefoon, DSLR Camera, GoPro, ama Microphone?
Sida Loogu Dhaqangeliyo Chatbot-ka Ganacsigaaga